Wasiiru dowlaha Bay’ada oo heshiis la saxiixday dhigiisa Maasar”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiiru dowlaha Arrimaha Bay’ada ee Xafiiska Raiisulwasaaraha Prof. Burci Maxamed Xamza oo dalka ku soo laabtay kadib markii uu ka soo qaybgalay Shirka Golaha Wasiiradda Africa u qaabilsan Arrimaha Bay’ada, Shirkaasi oo ka dhacay Dalka Masar.
Wasiiru dowlaha oo kulan la yeeshay Madaxda Waaxyaha iyo Shaqaalaha Xafiisikiisa, wuxuu shaaca kaqaaday waxyaabihii looga hadlay shirka ay muhiim u ahaayeen Soomaaliya gaar ahaan arimaha la xariira dhinaca Bay’ada taas oo in badan Soomaaliya ay soo daristay dhibaato dhinaca Bay’ada ,waxaana uu wasiirka rajo ka muujiyay in shirkani uu wax weyn ka badeli doono go’aanadii ka soo baxay shirka haddii loo qaato sida ku haboon.
Shirkaas oo ay ka soo qaybgaleen Wasiiradda Arrimaha Bay’ada ee Dalalka Africa, wuxuu sheegay in inta uu socday Shirkaasi in Shirar gooni gooni ah la yeeshay Wasiiradda kale ee Dalalkooda Metelayay sida Masar, Kenya, Koonfur Afrika iyo kuwo kale.
Prof. Burci Maxamed Xamza, inta uu shirkaasi socday wuxuu Hashiis Qoraal Rasmi ah oo ah mid isfaham ku saleysan (Memorandum of understanding) la saxiixday dhigiisa Dalka Masar.
Shirka dib u eegista Wasaaradaha Puntland oo furmay”SAWIRRO”